साहित्यपाटी:: Naya Nepal
मेरो नाम- पल्लवी। थर, पोख्रेल। त्यो दिन म एक नव-विवाहिता दुलही थिएँ। पहिलो दिन मात्र मेरो बिहे भएको थियो। मेरो पतिको नाम- आकाश अधिकारी। हाम्रो मागी बिहे भएको थियो। तर बिहे हुनुभन्दा पहिले २/३
साहित्यकार अविनाश श्रेष्ठले साहित्यिक पत्रिका सम्पादनको काम असममा हुँदै सुरु गरे । उनले सम्पादन गरेको पहिलो साहित्यिक पत्रिका हो ‘सलेदो’ । नेपाली साहित्य परिषद्, असमले सन् १९७४ मा प्रकाशन थालेको साहित्यिक पत्रिका सलेदोपछि उनले
दसैँको बिदालाई लक्षित गरी नेपाली बजारमा नयाँ पुस्तक निकाल्ने क्रम बढ्दो कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष त्यति धेरै पुस्तक बजारमा आएनन् । अधिकांश लेखक तथा प्रकाशकले सार्वजनिक कार्यक्रम नगरीकन पुस्तक बजारमा ल्याए । प्रायः नयाँ
२४ वर्ष पुगिसकेकी थिएँ, मेरो उमेरका सबैको बिहे भैसकेको र हुने क्रममा थियो। दुई जनाले बिहेको प्रस्ताव ल्याएर पनि रिजेक्ट गरिसकेका थिए। रिजेक्ट गर्नुको कारण थियो, आँखा मुनिको खत। सानोमा बैनीसँग खेल्दा ढोकाको पल्लामा
ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि मुलुकमा राजनीतिक क्षेत्रजस्तै सामाजिक क्षेत्रका मान्छेको पनि मूल्य, मान्यता र निष्ठामा खुलेरै कमी आउन थाल्यो। लोभीपापीको संख्या बढ्दै गयो। नयाँ राजा र तिनका आसेपासेको चाकडी गर्न राजनीतिज्ञ मात्र हैन, राजनीतिलाई
‘फेरि तँ त्यही भिखारीकी छोरीलाई भेटेर आइस्? हाम्रो इज्जत कति छ थाहा छैन तँलाई? त्योसँग बिहे गरिस् भने त मलाई आमा नभने नि हुन्छ तैंले बुझिस्! हाम्रो खान्दानको इज्जत माटामै मिला ‘खाना खान आउनुस्’ भनी